Iiraan oo lagu eedeeyay in hubka ay siiso Xuutiyiinta ay mariso Soomaaliya..
Home » WARARKA MAANTA » Iiraan oo lagu eedeeyay in hubka ay siiso Xuutiyiinta ay mariso Soomaaliya..	Iiraan oo lagu eedeeyay in hubka ay siiso Xuutiyiinta ay mariso Soomaaliya..
30/11/2016	603 Views Hay’ad amniga iyo hubeynta baaris ku sameysa oo uu fadhigeedu yahay Dalka Ingiriiska ayaa Dowladda Iraan ku eedeeysay in ay si dadban u hubeyso Xuutiyiinta dalka Yemen iyada oo hubkaasi u maresiineysa Soomaaliya.
Dowladaha Mareykanka iyo Sucuudiga ayaa horay Iiraan ugu eedeeyay in ay hubeyso Xuutiyiinta Yemen inkasta oo ay Iiraan arrintaasi beenisay.
Hay’adda CAR,waxaa ay sheegeysaa in Dowladda Iiraan ay hub farabadan ku wareejisay Xuutiyiinta Yemen iyada oo Hubkaasi marsiisay Soomaaliya.
Warbixintan ayaa la ogaaday kadib markii mid ka mid ah Maraakiibta Xeebaha Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen Markab uu saaran yahay Hub farabadan kaas oo la tuhmayo in uu hubkaasi ku dejinayay Soomaaliya kadibna loo gudbinayay Xuutiyiinta Yemen.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Ganacsato Soomaali ah oo suuqa madow Hubka ugu ganacsada ay Hubkaasi u gudbinayaan Yemen iyaga oo ka qaadayo xeebaha MaamulkaPuntland ee Waqooyi barI Soomaaliya.
Hubka la qabtay waxaa uu tiro ahaan ka badan yahay 2,000 oo xabo kaas oo isugu jira noocyada fudud iyo kuwa culus waxaana ka mid ah 100 Gantaal oo ah nooca ay sameyso IIraan..
Waxaa kale oo ku jira 64 Qoryaha Shiishka ee Hoshdar –M, oo ah kuwa ay sameyso Iiraan,islamarkaana ku socday Xuutiyiinta Dalka Yemen ka dagaallamaya hadda.
Qoryaha waxaa kale oo ka mid ah kuwa darandoorriga u dhaca iyo rasaas ay sameyso Dowladda Waqooyiga Kuuriya oo Iiraan ay siyaasad ahaan iska ag dhowyihiin,waxaana warbixintan ay taageereysaa walaaca golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ay ka qabaan colaadda Yemen in ay dhinac ka tahay Iiraan.
Previous: Puntland oo lagu qanciyay iney dib u bilaabaan Doorashada Aqalka Hoose..
Next: Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’